Galitaanka Isuduwaha ah ee Adeegyada Hoylaawe - Wadashaqaynta Tucson Pima si loo Joojiyo Hoy La'aanta
Miyaad wajahaysaa guri ka saarid? Ma u baahan tahay caawimaad bixinta kiradaada?
Riix halkan si aad u codsato caawimo haddii aad dib uga dhacday kiradaada.
Riix halkan si aad u dhammaystirto qiimaynta adeegyada ka hortagga guri la'aanta haddii aad heshay ogeysiis 5 maalmood ah ama aad ku jirto 14 maalmood gudahooda markaad jir ahaan ka soo saartay gurigaaga.
Isku-duwaasha Isku-dubbaridan ayaa ah hab fudud oo loogu talagalay dadka ay haysato guri-la'aantu, ama halis ugu jirta hoyla'aan, si ay u helaan caawimaadda ay u baahan yihiin. Adeegyada guryeynta waxaa lagu marin karaa hal qiimeyn oo lagu dhammeystiro goob kasta oo Helitaanka Beesha ah. Iyada oo ku saleysan qiimeynta, shakhsiyaadka guri-laawayaasha ah iyo qoysaska sida ugu badan ugu baahan caawimaad waxaa la geliyaa liistada ahmiyada ballaaran ee bulshada loogu talagalay kaalmada guryeynta kuwaas oo tobaneeyo barnaamijyo maxalli ah ay aqbalaan gudbinta.
Isku-duwaha Isudheellitirka ah wuxuu adeegsadaa qaab cadaalad ah, oo aan cadaalad ku dhisneyn oo ahmiyada la siinayo dadka si loogu gudbiyo adeegyada guriyeynta iyadoo lagu saleynayo darnaanta baahidooda iyo ilaha kale. Reeraha ayaa dhammeystiraya hal qiimeyn oo keliya si loo go'aamiyo adeegyada ay u qalmi karaan. Qalabkaan ku saleysan qiimeynta cilmi baarista wuxuu caawiyaa khubarada guryeynta inay aqoonsadaan shaqsi kasta ama qoyskiisa baahiyahiisa gaarka ah iyo kheyraadka si ay ugu xirnaadaan caawimaadda ay u baahan yihiin.
Isku-duwaha Isku-dubbaridan wuxuu bixiyaa xog si looga caawiyo bulshadayada inay si wanaagsan u qorsheyso baahida guryaha. Dhammaan qiimeyntu waa kuwa udhexeeya si aan si wanaagsan ula socon karno codsiyada gargaarka, u diritaannada, adeegyada la bixiyo iyo arrimo door ka geysanaya hoy la'aanta.
Haddii aad ubaahantahay kaalmada guriyeynta, booqo mid ka mid ah Qodobbada Helitaanka Beesha ee hoos ku taxan.
Haddii aad aamminsan tahay in lagugu takooray ama si caddaalad darro ah laguguula dhaqmay Nidaamka Isku-darka TPCH, ama haddii aad tahay adeeg bixiye oo aad rumeysan tahay in TPCH ay ku xadgudubtay nidaamkeeda iyo Nidaamkeeda gelitaanka Isku-dubbaridka, halkan guji si aad u buuxiso una soo gudbiso cabasho.
Meelaha Isuduwaha Galitaanka ee Isuduwid ah
Iyada oo laga jawaabayo COVID-19, qiimeynta guryaha waxaa lagu sameeyaa taleefan kaliya inta badan Barta Helitaanka. Qiimaynta ayaa hadda laga heli karaa goobaha / lambarrada taleefannada iyo liisaska wakhtiyada hoos ku qoran. Maxaa laga filan karaa markaad dhammaystirto qiimaynta Galitaanka Isku-xidhka ah ee taleefanka: 1) Waxaa lagu weydiin karaa inaad ballan ka samaysato qiimeeyaha si uu wicitaan kuugu soo celiyo ama laguugu soo diro xagga cod-bixinta. Hadday taasi dhacdo, isku day inaad wacdo Xarun kale oo Access ama ka sugto wicitaan ka soo galo Access Point oo aad farriin uga tagtay. Waxay kuugu soo celinayaan wicitaankaaga 1 maalin shaqo gudahood. 2) Waxaa laguu gudbin karaa hay'ad kale ama nambarka taleefanka ee liiskaan. 3) Waxaa laguu aqrin doonaa sii deynta macluumaadka aad caadiyan si shaqsi ah u saxiixi laheyd laakin waxaa lagu weydiin doonaa oo kaliya inaad ogolaato. 4) Waxaa lagaa codsan doonaa inaad dhameystirto baaritaan caafimaad oo kooban si loo qiimeeyo baahida loo qabo go'doomin ka dhasha COVID-19. 5) Nidaamka qiimeynta guryaha wuxuu qaadan doonaa 30 daqiiqo.
Telefoon Kaliya - (520) 624-5518
Isniin - Jim, 10am - 6pm
Telefoon la doorbiday - (520) 882-8422
Isniin - Jimco 8am - 4pm
Talaado & Khamiis - 3 pm-6pm:
Arbaco & Jimco - 3 pm-6pm & Sab 10 am-2pm:
Telefoon Kaliya - (520) 622-5411
Isniin-Sabti, 2 pm-7pm
Shakhsi ahaan: 702 S 6th Ave
Isniin, Wed, Thur, Jimce - 9 am 12:30 pm
Telefoon - (520) 308-3079
Isniin, Wed, Khamiis, Jimce - 1 pm - 4galabnimo
Talaado - 8 subaxnimo - 4galabnimo
Telefoon Kaliya - (520) 323-1708
Isniin-Jimce, 9 am-4pm
Adeegyada Bulshada ee Old Pueblo
Telefoon Kaliya - (520) 546-0122
Isniinta-Jimcaha - 9 am-4pm
Qodobbada Helitaanka Bulshada
La xiriir qof kaa caawin kara dayactirka ama dib u helida guri.
Guji calaamadeeyeyaasha khariidada hoosta cinwaannada iyo saacadaha.
Raadinta qiimeyn guri?
Goobaha badankood waxay ku sameynayaan qiimeyn taleefan. Haddii aadan ku dhammaystiri karin qiimeyntaada taleefan, fadlan booqo mid ka mid ah goobaha soo socda si aad u qiimeyso shaqsi ahaan:
Xarunta Maalinta La Frontera RAPP
Hay'adda Primavera Foundation HIP
702 S. 6 Jidka
M, W, Th, Jimce, 9 AM-12:30PM
Khadka Tooska ah ee Rabshada Guriga
Soo bax! Khadka Tooska ah ee Qalalaasaha, furitaanka 24 / 7
Dhallinyarda (Da'da 12-17)
Meel aamin ah, fur 24 / 7